Indlu yaseWelsh enomtsalane kwiPaki yeSizwe yaseSnowdonia
Corris Uchaf, Wales, United Kingdom
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKatie
IPen y Cwm yindlwana eyonwabisayo yaseWales ehleli kwimida ye-Snowdonia National Park. Le ndlu yenye yeepropathi ezimbini ezimangalisayo zeholide ezibekwe kwiholo iTynyberth kufutshane nelali yakudala yemigodi yaseCorris. Zombini iipropathi zonyulwe ngokumangalisayo, nganye iza nobunewunewu bebhafu eshushu yabucala kunye nentaphane yezixhobo ezikwisiza kubandakanya ibala legalufa elinemingxuma eli-18, indawo yokuqubha eshushu yangaphandle efumanekayo ukusuka kuMbindi ka-Epreli ukuya ekupheleni kukaSeptemba kunye noluntu. igumbi lemidlalo.
UPen y Cwm wayefudula esenza uqhaqho lukagqirha kwilali encinci yaseCorris, kufutshane neMachynlleth eMid Wales. Ngomgangatho wokuqala wesileyiti (phantsi komgangatho ofudunyeziweyo), imiqadi eveziweyo kunye nezitovu ezithambileyo zokutshisa iinkuni ukongeza ubushushu kubusuku obubandayo basebusika, le ndlu yangasese ibonelela ngeenyanda zobuntu. Iseti yamanyathelo esileyiti alishumi elinesibini akhokelela kwipropathi, apho ufika kwigumbi le-boot ukuze ugcine izihlangu zakho ezinodaka xa uhamba ezindulini. Ngaphakathi ungaphumla ngokupheleleyo kwigumbi lokuhlala elipholileyo, kunye nomlilo ovuthayo njengoko ujonga izinto osele unazo ukuza kuthi ga ngoku. Igumbi lokutyela lidlala ngorhatya olusesikweni kunye nesidlo esimnandi esiphekwe kwikhitshi elimiswe kakuhle elinesinye isitofu seenkuni. Phezulu, kukho igumbi lokuhlala elinendawo yokuhlambela yonyawo, igumbi losapho elineebhedi ezi-3 ezingatshatanga, ezilungele abantwana kunye negumbi lokuhlambela losapho. Ngaphandle, unegadi entle yokufunxa ilanga lasehlotyeni ngebhafu yabucala eshushu. Qaphela: Lo mhlaba ungabhukishwa eCareiau Esgid Lodge kunye bangalala abantu abali-10.
5.0 ·Izimvo eziyi-6
5.0 · Izimvo eziyi-6
Machynlleth 6 miles; Aberdovey 15 miles.
Le lali yemveli Welsh imi ngqo kumda wenxalenye esemazantsi Snowdonia National Park. Ibekwe elunxwemeni loMlambo iDulas kwaye ijonge kumathambeka anemithi yehlathi leDovey, le lali yakudala yokwembiwa kwelitye ifanelekile kubantu abathanda ukukhwela ibhayisekile yeentaba. Ilali ine-pub kwaye ijongene ngqo ne-mountain biking eyaziwayo i-Cli-machX, kunye neZiko leBhayikhi elidumileyo leCoed-y-Brenin elikufutshane. Le lali ikwabonelela ngembali kaloliwe we-Corris emxinwa, iziko lobugcisa eligqwesileyo, iziko le-Corris slate yemigodi yoMhloli wemigodi kunye ne-King Arthur's Labyrinth Underground Experience, kunye nokuhamba okunomdla kwasekhaya okuxhaphakileyo.
Fumanisa iTarrens, eyona ndlela ibalaseleyo yokuhamba eWales kunye neentaba ezintle zeCader Idris kunye neAran Fawddwy zombini ezikufutshane.
Yonwabela usuku olumnandi kwi-Tal-y-Llyn Railway nakwilali eyonwabisayo yezibuko i-Aberdovey eneendawo ezahlukeneyo zokusela kunye neendawo zokutyela, unxweme oluthandekayo lwesanti kunye nebala legalufa.
Idolophu ephithizelayo yaseBarmouth imalunga nesiqingatha seyure xa uhamba ngemoto enonxweme olunesanti, uluhlu oluhle lweevenkile, ii-pubs kunye neendawo zokuzonwabisa. IFairbourne, ilali esecaleni kolwandle, ingaphaya kwechweba apho unokuzulazula kunxweme olunesanti yeemayile ezi-2 okanye ukonwabele ukukhwela ihashe kwindawo entle.
Ukuze ufumane i-adventure engakumbi kunye ne-adrenaline, yiya phambili kancinane kwibala eliya eLake Bala lokukhwela amanzi amhlophe; okanye kwi-Slate Carverns eBlaenau Ffestiniog enika intambo ye-zip ethatha umoya, i-adventures ye-cavern kunye ne-Bounce Ezantsi, ibala lokudlala elimangalisayo elingaphantsi komhlaba.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$204
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Corris Uchaf